Iikhowudi ze-QR zijongana neemarike ezintsha | I-Androidsis
Los Iikhowudi zeQr Bafumana indawo kumazwe aseNtshona kwaye zisetyenziswa ngakumbi kwiindawo ezahlukeneyo zobomi. Siyabona Iikhowudi zeQr ukufikelela kukhuphelo oluthe ngqo lwezicelo ezivela kwifayile ye- I-Android Market, Siyabona Iikhowudi zeQr ngolwazi lomntu siqu lwabasebenzisi apho xa ulskena basibonisa idatha yobuqu okanye iidilesi ze-imeyile, iinombolo zomnxeba okanye ulwazi olwahlukeneyo. Ezi khowudi ziluncedo kakhulu kwaye ziyindlela ekhawulezayo yokufumana ulwazi kunye nokufumana ulwazi ngokulula kakhulu.
Umzekelo ocacileyo wokuba ezi ntlobo zeekhowudi zifikelela kumacandelo ahlukeneyo kunye nobomi obahlukeneyo ziikhowudi endizishiya ekupheleni kwesithuba.
En Android sinezicelo ezininzi ze funda kwaye wenze iikhowudi zeQr njengokuba zinjalo Iskena seBhakhowudi, iShopSavvy okanye iApp kwiQR. Ndiyakumema ukuba ubakhangele kwi I-Android Market, yifake kwaye uskene ifayile ye QR iikhowudi ukuba ndikushiye ngokulandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iikhowudi ze-QR zijongana neemarike ezintsha
UTom ibhombu sitsho
Ewe, kupholile malunga neekhowudi zeQR ... kodwa kutheni indalo yabo "ilawulwa"?
Sesiphi isicelo esikuvumela ukuba usombulule nantoni na oyifunayo (idatha yakho, umzekelo) kwiQR?
Phendula uTom Bomba
Kwenzeka kum kuphela, ukuba (ndicinga ukuba) ngenxa yokukhanyiselwa kwakhona kwe-TFT iselfowuni yam ayizibambi iikhowudi? : S
Kutheni ndingafumani ezinye izicelo kwiNtengiso?
Yeyiphi ifowuni onayo kwaye yeyiphi ingxelo ye-android?